Fuula Kolonoomaa Haara – Gubirmans Publishing
Posted on December 30, 2010 by bgutema
Itti bahi buta lafaa maal ta’inna
Gabaa addunyaa keessati ta’iisichi dorgommee finiinsaa kan mo’ummaa biyyoota Afrikaa caalaa hubu uumuuf deema. Dorgommooti imperiyaalistoota gidduu bara “Afrikaa walharkati qabaa” akka “Kiruger Telegram” fi “Fashodaa incident”jedhaman tahan ammallee hin irraanfatamne. Qabeenya saanii waan hin taanerrat morma waliiti gamaa turani. Afrikaan kan qabdu hunda dhabde; qabeenya, bilisummaa fi ulfina ilmoo nama. Walabummaan maqaa illee rakkina yeros dhalatan hin furre. Ta’iisichi haaraan rakkinicha caalaa gadi fageessuuf deema. Hireen finnaa Oromiyaa kanaa, maqa tibba baaquleessaa hedduu rakkistuu tate keessati argamu.